Hahatratra ny Fampanantenany Angovo Azo Havaozina Ve i Libanona Amin’ny Taona 2020? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2016 2:49 GMT
Bibilavanà Herinaratra avy amin'ny Masoandro eo ambony renirano, any Beyrouth. Loharano: Solar Lebanon ao amin'ny Twitter.
Nampanantena ny hampitombo 12 isan-jato ny ampahan'ny angovony azo havaozina i Libanona amin'ny taona 2020 tamin'ny Fivoriambe Mikasika ny Toetrandro tany Copenhagen ny taona 2009. Ny hiresaka ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny hiasa mba hamerana ny fitomboan'ny maripàna amin'ny ankapobeny tsy hihoatra ny roa degre selsiosy no tanjon'ny fivoriambe, toy ireo fivoriambe maro dia maro hatrizay.
Ankoatra ilay fampanantenàna, vao maika zava-dehibe ny resaka angovo azo havaozina raha jerena ny kirizin'ny fakon'i Libanona nisy vao haingana. Ny taona lasa, efa nanakaiky ny fikatsoana tanteraka mihitsy ny firenena raha toa ireo mpanao fihetsiketsehana, nampiasa ny anarana hoe ‘Maimbo Ianareo!’ (طلعت ريحتكم), nidina an-dalambe mba hanao hetsi-panoherana nanoherana ny kolikolin'ny governemanta sy ny tsy fahavitany manangona ireo fako. Amin'izao ankehitriny izao, nahatonga vokany tsy azo ivalozana ny kirizin'ny fako eo amin'ireo vondrona tena marefo indrindra ao Libanona. AFP aza nandefa sary nampitondrainy ny lohateny hoe ‘milomano ao anaty fako‘ any Libanona.
Nandray anjara vao haingana tamin'ny resadresaka tao amin'ny Aterineto nitondra ny lohahevitra hoe “afaka avadika angovo azo havaozina ny fako isan'andro“, izay mampifandray ny kirizin'ny fakon'i Libanona tamin'ny kirizin'ny angovony, ilay Libaney mpanoratra sy mpikatroka mafana fo, Sara El-Yafi .
Afaka avadika ho angovo azo ampiasaina ho an'i #Lebanon. ny fako isan'andro #RenewableEnergy @SaraYafi
Ao anatin'ny efatra taona tsy ahatongavan'ilay fepotoana, nandramana ny namantatra raha efa eo an-dàlana amin'ny fahatratrarana ny fampanantenàny i Libanona.
Hahatratra ny fampanantenàny ve i Libanona?
Hatramin'ny 2014, fisalasalana amin'ny ho fahatratraran'ny governemanta ny fampanantenàny amin'ny angovo azo havaozina no asehon'ny antontan'isa. Tamin'ny tatitry ny Masoivohon'ny Angovo Iraisam-pirenena (IEA) ny taona 2014, mbola nisy fiankinana efa ho tanteraka amin'ny saribao sy ireo vokatry ny solitany.
Tatitry ny IEA ny taona 2014. Loharano: tranonkalan'ny IEA.
Fa ny fitsapankevitra natao vao haingana nomena ny lohateny hoe “Tatitra momba ny Angovo azo amin'ny Masoandro ho an'i Libanona ny taona 2015″ nahitàna fa “eo an-dàlan'ny fampiakarana malaky ny tahan'ny herinaratra ilaina ny angovo azo avy amin'ny masoandro mba hanatrarana ny filàn'i Libanona amin'ny herinaratra, ary hanampy amin'ny tsy fahampian'ilay rafitra tantanàn'ny fanjakàna (EdL).”
Manamboatra fifanarahana maitso
Araka ny Ivontoerana Libaney ho Fiarovana ny Angovo (LCEC), izay niforona tamin'ny alalan'ny fifanekana teo amin'ny Ministera Libaney misahana ny Angovo sy ny Rano ary ny Fandaharanasa Fampandrosoana an'ny Firenena Mikambana (PNUD), mbola vonona amin'izany fampanantenàna izany i Libanona. Anisan'ireo fikambanana maro any Libanona, miasa amin'ny fanenàna ny fiankinan'i Libanona amin'ireo loharanon'angovo tsy azo havaozina ny LCEC, indrindra ny solitany, ho amin'ireo fitaovana azo havaozina kokoa sy lovain-jafy.
Niresaka tamin'ny Global Voices, i Pierre El Khoury, Tale Jeneraly sady Filohan'ny Filankevi-pitantanan'ny LCEC, nanazava fa ao anatin'ireo andraikitra nomena ny LCEC, “tomponandraikitra amin'ny fampandrosoana sy ny fametrahana ny Drafitr'Asa Mahomby Amin'ny Angovom-pirenena (NEEAP) izy ireo, izay iaraha-miasa amin'ireo sampandraharaham-panjakana maherin'ny 40.”
Araka an'i El Khoury, nanampy tokoa tamin'ny ampahan'ny angovo azo havaozin'i Libanona ireo hetsika fampahafantarana, fampiofanana sy atrikasa nataon'ny LCEC, ary ny fametrahana ny rafitra famatsiambola Asa ho an'ny Angovom-pirenena Mahomby sy Azo Havaozina (NEEREA), rafitra famatsiambola maitso izay manome fampindramam-bola amin'ny fotoana lava ary amin'ny tahan'ny zanabola ambany, natao indrindra mba hanampiana ireo sehatra tsy miankina hametraka fepetra sy tetikasanà angovo azo havaozina. Tafiditra ihany koa amin'ny tetikasa Bibilavanà Herinaratra avy amin'ny Masoandro eo ambony renirano (BRSS) izy ireo, ankoatra ireo hafa.
Tao amin'ny vohikalany, nahita izahay fa:
Tafiditra tamin'ny fanavaozana sy fampandrosoana ny asa amin'ny lafiny lalàna sy an-taratasy ilaina amin'ny fanaovana ho maitso ny sehatry ny angovo ihany koa ny LCEC. Hatramin'izao, nametraka tetikasan'angovo maro, mahomby sy azo havaozina, ary fandraisana andraikitra ny LCEC, izay niteraka fiovàna miabo marobe teo amin'ny fiarahamonina sy toekarena Libaney.
Fikisahana ho amin'ny angovo azo amin'ny masoandro
Ao anatin'ireo olana maro mampihisatra ireo fandrosoan'ny angovo, tena zavatra iray lehibe tokoa ny mandresy lahatra ny sehatra tsy miankina hikisaka ho any amin'ny teknolojia maitso raha toa ka ahitàna fidinana be ny vidin'ny gazoaly. Io, hoy i Ali Ezzeddine, tanora mpandraharaha sady nanorina ny GP Stellar SARL, dia orinasa fakànkevitra sy mpifampiraharaha amin'ny resaka angovo azo havaozina any Beyrouth, izay miasa miaraka amin'ny LCEC sy ny Ministeran'ny Angovo sy ny Rano amin'ny alalan'ny NEEREA.
Tafiditra tamin'ireo tetikasa maro manerana an'i Libanona ny GP Stellar, amin'ny Sehatra Indostrialy sy Fikambanana Tsy Miankina amin'ny Fanjakana ary amin'ny Sehatra Fanabeazana amin'ny fampandrosoana, sahala amin'ny fametrahana takelaka fakàna angovo azo amin'ny masoandro tsy manam-paharoa ho an'ny Fondation Imam Sadr any Tyra, atsimon'i Libanona ary ny Tetikasa Fanazavàna amin'ny Masoandro ao amin'ny Tobin'ny Mpitsoaponenana Syriana ao Bar Elias.
Ny ekipan'ny GP Stellar tao amin'ny Tobin'ny Mpitsoaponenana ao Bar Elias. Loharano: Pejy Facebook an'ny GP Stellar.
Porofon'ny fahavitrihan'ny fiarahamonina sivily any Libanona ireo zavatra ataon'ny GP Stellar, izay manosika hatrany hitady ireo vahaolana lovain-jafy, ho an'ny kirizin'ny fako sy ny kirizin'ny angovo.
Ao ambadik'ireo fampanantenàna, ny sary lehibe
Sarotra ny hilaza raha ho voavahan'i Libanona ara-potoana ireo olana ireo. Araka ny nampahatsiahivin'ilay Libaney mpanao gazety, Nadine Mazloum, antsika vao haingana tamin'ny ‘Efitry ny fanaovan-gazety Mifindrafindra’, lasa any amin'ny Faha-52 raha niala tamin'ny Faha-30 i Libanona amin'ny resaka fahasalamana, araka ny tatitry ny Fahafaha-mifaninana Manerantany vao haingana indrindra ny taona 2016.
Manohy miady amin'ireo kirizy hita ho tsy misy fahataperany i Libanona, tafiditra amin'izany ny fitantanana ny fako sy ny resaka filoham-pirenena, mitondra amin'ny fitsambikinana avy tamin'ny faha-30 tamin'ny 2014 ka lasa any amin'ny faha-52 ny 2015, amin'ny resaka fahasalamana sy fampianarana fototra, araka ny tatitra vao haingana momba ny Fahafaha-mifaninana Manerantany ho an'ny taona 2016.
Midika izany fa mety hahita hetsi-panoherina hipoitra indray isika satria mbola mitohy ny kirizin'ny fako. Na mety hoe, hahatratra ny fampanantenàny amin'ny angovo azo havaozina ny governemanta eo ampiadiana amin'ny kirizin'ny fako?